Firenena tsy misy Visa ho an'i Ghana - ALinks
Jolay 20, 2021 Maitri Jha Ghana, visa ho
Raha Ghaneana ianao dia tokony ho fantatrao fa kely kokoa ny isan'ny firenena tsy misy visa ho an'ireo manana pasipaoro Ghaneana. Misy firenena 65 manolotra fidirana maimaim-poana. Ireo firenena ireo dia mety manana karazana antontan-taratasy isan-karazany, toy ny eVisa, Visa amin'ny fahatongavany, na fahazoan-dàlana hitsangatsangana. Ireny antontan-taratasy ireny dia tsy mitovy amin'ny taratasy visa fa mora azo izy ireo. Satria tsy mandray ezaka sy fotoana betsaka toy ny taratasy visa izy ireo.
Firenena tsy misy pasipaoro any Ghana:
Bolivia - Visa rehefa tonga / eVisa
Kaomoro - Visa amin'ny fahatongavany
Etiopia - Visa rehefa tonga / eVisa
Jordania - Visa amin'ny fahatongavany
Libanona - Visa rehefa tonga
Madagascar - Visa rehefa tonga / eVisa
Malawi - eVisa / 90 andro
Maldives - Visa rehefa tonga
Maoritania - Visa rehefa tonga
Mozambika - Visa rehefa tonga
Nikaragoa - Visa rehefa tonga
Pakistan - Visa rehefa tonga / eVisa
Palau - Visa rehefa tonga
Saint Lucia - Visa rehefa tonga
Samoa - Visa rehefa tonga
Seychelles - fisoratana anarana amin'ny fizahan-tany
Somalia- Visa rehefa tonga
Sodana atsimo - eVisa
Tuvalu - Visa rehefa tonga
Ozbekistan - eVisa / 30 andro
Zambia - Visa rehefa tonga / eVisa
Laharana ny Passports Ghana
Araka ny fanondroana ny pasipaoro Guide, ny pasipaoro Ghaneana dia laharana Faha-81. Mamela ny dia tsy misy visa any amin'ny firenena 62. Ireo manana pasipaoro Ghaneana, saingy, mila visa hitsidihana firenena 167 erak'izao tontolo izao. Thailand, Torkia, Rosia ary ny Vondrona eropeana iray manontolo dia ao amin'ireo firenena tsy maintsy manana visa. Noho ny filan'ny visa ambony dia ratsy ny isa mivezivezy.
Momba an'i Ghana
Ghana dia zanatany britanika taloha fantatra amin'ny anarana hoe Republic of Ghana. Mizara 16 ny faritra ary any Afrika Andrefana no misy azy. Burkina Faso, Togo, Côte d'Ivoire, ary ny Hoalan'i Guinea no mpifanila vodirindrina aminy. Greater Accra, ny Atsinanana Atsinanana, ary ny faritra afovoany no zava-dehibe indrindra. Amin'ny velarantany 239,567 kilometatra toradroa dia i Ghana no firenena faha-32 lehibe indrindra any Afrika. Izy io dia manana toetr'andro tropikaly miaraka amin'ny toetr'andro maina eny amoron-dranomasina, toetr'andro mafana any avaratra ary toetr'andro mando any atsimo andrefana. Ny jeografia dia misy lemaka fisaka indrindra amin'ny lemaka atsimo-afovoany.
GhanaFirenena tsy misy Visa ho an'i Ghana
Makà visa Schengen Espaina !! Araho ireo dingana ireo !!
Ahoana ny fomba hahazoana visa ho an'i Torkia avy any Etazonia?
Banky tsara indrindra any Afghanistan
Firenena tsy misy Visa ho an'i Indonezia! Zahao eto!
Oniversite tsara indrindra any Aostralia ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena
Banky tsara indrindra any Ghana
Firenena tsy misy Visa ho an'ny sri lanka! Zahao eto!
Firenena tsy misy Visa ho an'ny olom-pirenena Nepali
Banky 5 ambony any Nepal
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Dhaka?
oniversite tsara indrindra any Nouvelle Zélande
Banky any Syria
Afghanistan (12) fanampiana (10) Aostralia (18) Aotrisy (12) Kanada (21) Shina (17) Kolombia (7) Danemark (11) DR Kongo (7) Frantsa (16) Germany (17) mandehana (27) fahasalamana (29) Hong Kong (11) trano fandraisam-bahiny (28) trano (15) India (82) Irak (14) Italia (22) asa (84) Malezia (12) Meksika (22) ny vola (35) Nizeria (12) Norvezy (12) Pakistan (13) mpitsoa-ponenana (36) Rosia (14) Arabia Saodita (9) am-pianarana (20) Espaina (18) fianarana (36) Soisa (7) Thailand (13) zavatra vidiana (107) zavatra atao (48) Travel (164) vorontsiloza (25) Emira Arabo Mitambatra (15) Oganda (9) UK (55) USA (34) rohy mahasoa (23) Venezoela (12) visa ho (92)